Baro inta aan isticmaalno Apple Watch | Wararka IPhone
Baro inta aan isticmaalno Apple Watch
Waxaan horey uga faallooday maqaallo hore, taas isticmaalka aan ka sameysan karno Apple Watch oo ku xiran iPhone wax shaqo ah kuma laha Dhagax ama Android Wear ku xidhan isla telefoonka. Apple Watch waxay noo ogolaaneysaa inaan la falgalno labada dhinacba isla markaana aan wax badan ka soo saarno qalabkeena curcurka ee ay soo saarto Apple marka loo eego haddii ay soo saari laheyd tartanka iyadoo la xadidayo waxyaabahaani.
Daraasad ayaa hadda la daabacay iyadoo muujineysa waqtiyada aan u isticmaalno Apple Watch maalin kasta iyo badiyaa barnaamijyada aan ku qabanno qaab caadi ah. Celceliska tirada jeer ee adeegsadayaasha Apple Watch ay la falgalaan qalabka ayaa u dhexeeya 60 illaa 80 jeer maalintii. Xaaladaha badankood waxaan kaliya u sameynaa inaan hubino waqtiga.
Sida lagu sheegay daraasadda waxa ugu yar ee aan sameyno waa akhrinta sixitaanka elektiroonigga ah sida aan u qaabileyno. Laakiin haddii aan sii wadno akhrinta natiijooyinka warbixinta, waxaan xaqiijineynaa in booska labaad, ka dib markaan aragnay waqtiga, adeegsadayaasha Apple Watch waxay adeegsadaan aaladda si ay ula tashadaan ogeysiisyada kala duwan ee aan ka helno aaladdayada, haddii ay yihiin emayl, farriimo ka imanaya codsiyada farriimaha. , sms ... celcelis ahaan waxaan ku qaadanaa 9,2 ilbiriqsi.
Booska saddexaad waxaan ka helaynaa codsiga loogu talagalay in lagu qiyaaso noocyada jimicsi ee kala duwan in aan sameyno inta aan isticmaaleyno Apple Watch, oo leh 6%, iyo sidoo kale xarunta ogeysiiska haddii aan helno ogeysiis aan seegnay. Marka xigta, dalabka ugu badan ee la isticmaalo waa Waxqabad, si loo hubiyo haddii aan la kulannay yoolalkayada gubanaya kaloriinta, tallaabooyinka aan ku safrayno iyo saacadaha cagaheenna.
Inta badan isticmaalayaasha badanaa isticmaal barnaamijyadooda hooyo kuwaas oo lagu rakibay telefoonka, kaliya 1% isticmaalka aaladda ayaa loo adeegsadaa codsiyada qeybta saddexaad ee aan ku rakibnay Apple Watch. 1% kan wuxuu kaloo metelaa boqolkiiba isticmaalka aan ku sameyno wicitaanada taleefanka iyo khariidadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Baro inta aan isticmaalno Apple Watch
Peter Ruiz dijo
Saaxiib Ignacio, dib u eegistaadu way fiicantahay laakiin way ka sii fiicnaan laheyd haddii aad isbarbar dhigto xiriirka ama ugu yaraan aad daabacdo isha macluumaadkaaga tan iyo markii aad xustay in "maqaal hada la daabacay" laakiin maad tixraacdo cinwaanka maqaalka ama qoraaga. Salaan iga timid Mexico.
Jawaab Pedro Ruiz
Top 25 Tweaks ee loogu talagalay iOS 9 - Nuqulka Noofambar
Buugga Steve Jobs, laydhadhka iyo hooska hanadleyda